के तपाईलाई थाहा छ नेपालमा कति प्रजातिको धान फल्छ ? (सूचि सहित) - halokhabar.com के तपाईलाई थाहा छ नेपालमा कति प्रजातिको धान फल्छ ? (सूचि सहित) - halokhabar.com
(No Comments) September 30, 2018
काठमाडौं, १४ असोज । नेपालमा कति र कुन कुन प्रजातिको धान फल्छ ? यसको जानकारी मौखिक रुपमा त कसैलाई पनि थाहा नहुन सक्छ । तर, राष्ट्रिय बीउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रले यसको लेखा तयार पारेको छ ।
केन्द्रले प्रकाशन गरेको ‘राष्ट्रिय बीउ बिजन समितिबाट सूचित वाली तथा जातहरु २०७४÷७५’ को बारेमा तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । तथ्याङ्क अनुसार अहिलेसम्म नेपालमा ९८ प्रजातिको धान रापिदै आएको छ । नेपालमा २०२४ सालदेखि ‘ताईचुङ १७६’ धान रोप्न थालिएको पाईन्छ । यो धान पाक्न १४४ दिन लाग्ने जनाईएको छ ।
ताईचुङ धान प्रति हेक्टर ७ दशमलब ९ मेट्रिक टन धान फल्ने जनाइएको छ । त्यसैगरी नेपालमा रोप्न थालिएको सवैभन्दा पछिल्लो धानको प्रजातिको नाम हो ‘एचजेजि १०’ हो । यो धान समून्द्र सतहदेखि ७०० मिटरको उचाईसम्ममा फल्छ । तराई तथा भित्री मधेस, नदीको किनारा तथा समतल क्षेत्रमा फल्ने जनाईएको छ । अन्य धानको बारेमा यहाँ क्लिक गर्नुहोला ।